हिजो पनि म,र्न हिँडेको हो ! बरु म*र्न तयार छु-आ क्रोशमा प्रचण्ड -
हिजो पनि म,र्न हिँडेको हो ! बरु म*र्न तयार छु-आ क्रोशमा प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागि कुनै हालतमा नझुक्ने बताएका छन् । प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षका लागि आफू मर्न तयार रहेको तर, नझुक्ने बताएका हुन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित उपत्यकास्तरीय विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आक्रो,शित ढंगले प्रस्तुत भएका प्रचण्डले अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले युवा विद्यार्थीलाई अझ जुझारु र आक्र,मक कार्यक्रम ल्याउनसमेत निर्देशन दिए । उनले देशलाई अध्यारो भड्खालोमा हालेको हेर्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।
‘विद्यार्थी साथीहरु तपाईहरु अलि जुझारु र आक्रमक कार्यक्रम बनाउनुहोस् । हामी नेतृत्व गर्न अन्तिमसम्म पनि तयार छौँ’, विद्यार्थीलाई निर्देशन दिनेक्रममा प्रचण्डले भने, ‘देशलाई अध्यारो भड्खालोमा हालेको धेरै बेर हेर्न सकिँदैन । हिजो पनि म,र्न हिँडेको हो । मर्नुपरे मर्न तयार छौँ । तर, झुक्न तयार छैनौँ ।’
इतिहासको निर्माता जनता भएको र इतिहासमा ठूलाठूला परिवर्तन जनताले गरेको भन्दै प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तिम समयसम्म संघर्ष गर्ने भन्दै यस्तो बताएका हुन्। ‘इतिहासको निर्माता जनता हो अरु कोही होइन’, अगाडि उनले भने, ‘इतिहासमा ठूलठूला परिवर्तन जनताले गरेका छन् ।’प्रचण्डले यो प्रतिगमनलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने प्रष्ट पारे । ‘नेपाललाई प्रतिगमनतर्फ लाने भ्रम नपार्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने, ‘हाम्रो लोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धतालाई कसैले कमजोर नठानोस् । प्रतिगमन कुनै हालतमा सफल हुँदैन ।’
Previous छाउपडी गोठमा एक महिलाको मृ*त्यु,यो उदाहरण मात्र हो
Next बि!बाद चर्किदा वडाध्यक्षको झन्डै गयो